Antsiranana : dokotera mpivady notifirin’ny jiolahy tao an-tranony | NewsMada
Antsiranana : dokotera mpivady notifirin’ny jiolahy tao an-tranony
Maty tsy tra-drano ilay rangahy vazaha frantsay voatifitra. Teny an-dalana halefa amin’ny fiaramanidina ho any ivelany kosa no maty ramatoa. Dokotera malaza ao Antsiranana ao ireto maty ireto. Manahy fanirahana hamono ny havany…
Asan-jiolahy sa irak’olona! Mpivady iray maty notifirin’ny jiolahy tao an-tranony, tany Betahitra, lalana Ramena Antsiranana, ny alin’ny zoma lasa teo. Voan’ny bala roa tao amin’ny lamosiny i Toharain Sylvain, 64 taona, teratany frantsay. Voa teo amin’ny tarehiny ramatoa vadiny, ny dokotera Razafindranambary Marinette, izay dokotera malaza be sady fantatry ny rehetra any Antsiranana. Ity farany, maty teny an-dalana ho eny amin’ny seranam-piaramidina, saika halefa hotsaboina any ivelany. Tsy nahatsiaro tena tao amin’ny hopitaly manara-penitra izy io, raha nialana nenina. Voan’ny bala teo amin’ny tarehiny ary nisy fiantraikany tany amin’ny lohany. Nanapa-kevitra ny fianakaviany ny handefa azy hotsaboina any ivelany kanjo tara loatra.
Araka ny fanazavana azo, tao amin’ny tranony tao ambany rihana no nahavoatifitra azy mivady ireto. Voalazan’ny mpiambina ny tanàna, araka ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana, fa jiolahy efa-dahy nanao saron-tava nitondra Kalachnikov sy antsy be no niditra tao an-tanàna. Raha vao nahatazana azy ireo jiolahy, nilaza ny hitifitra, ka nitsoaka nitsambikina ny tamboho ilay mpiambina. Nilaza ho niantso vonjy tamin’ny alalan’ny antso maints 119 sy 117 izy tamin’io alina io. Nandritra izany, niditra ireo olon-dratsy, tsy hay na iraka ny hamono na hangalatra fotsiny ihany fa nitiftra tsy am-pihambahambana azy mivady lehibe ireo. Efa 45 minitra taty aoriana vao tonga tany an-toerana nisehoan’ny fanafihana ny mpitandro filaminana. Mandeha ny fanadihadiana.
Lasibatra ny Frantsay?
Tsy voalohany ity famonoana mpivady sy teratany frantsay ity teto amintsika fa efa maromaro ihany. Tany Toliara, nahafaty ireo mpivady frantsay, tany Nosy be, ny fandoroana ireo vazaha roa lahy. Asa raha fifanandrifian-javatra ihany izany, na tena misy antony manokana. Ny azo antoka aloha, hampihena ny fifampitokisana eo amin’ny fitondrana sy ry zareo vahiny indray ity toe-javatra mampihorohoro ity. Mampiseho tsy fandriampahalemana tsy voafehy mihitsy raha izao raharaha izao. Mandry tsy lavo loha ny olona, ary mitaintaina izao na olona manana ny maha izy azy, na ireo olon-tsotra tsy manana ny ampy aza. Raha tsy voatafika ao an-trano ianao, mety ho voaendaka eny an-dalana. Na an-dRenivohitra na ambanivohitra, samy ampihorohoroan’ny jiolahy sy ny dahalo avokoa.